हिंजो बढेको सुनको भाउ आज यति धेरैले घट्यो ! हे’र्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो…… – SUDUR MEDIA
March 26, 2021 March 26, 2021 AdminLeaveaComment on हिंजो बढेको सुनको भाउ आज यति धेरैले घट्यो ! हे’र्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो……
आज मिति २०७७ साल चैत १३ गते शुक्रबारको दिन सुनको मूल्य तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेकाे छ । अघिल्लो दिन हिंजो बिहीबार तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ शुक्रबार पुनः घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासँघका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुन प्रतितोला ८६ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ८५ हजार ८५० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । यस दिन चाँदीको भाउ भने स्थिर छ। चाँदी प्रतितोला १ हजार २३० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर – कुन देशको विनिमयदर कति ? हेर्नुहोस् (तालिका सहित)….
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । जस अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ ।
बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १५८ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १५९ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अरू कुन देशको मुद्राको दर कति हेर्नुहोस्ः